Waa Inaan Joojinnaa Sheegida Kuwa Saameynta Leh Markaan Ujeedo Caan Ah | Martech Zone
Waa Inaan Joojinnaa Sheegida Kuwa Saameynta Leh Markaan Ujeedno Caan
Sabtida, Diisambar 29, 2012 Sabtida, Diisambar 29, 2012 Douglas Karr
Waxaan maanta markale arkay List Liis kale oo 2012 Saameeyayaal ah. Kama dhex mari karin liistada oo dhan, in kastoo, maxaa yeelay waxaan aad ugu mashquulsanaa inaan cidiyahayga wajiga hoos u rujiyo oo aan timahayga dibadda u soo bixiyo. Ma ahayn liis saamayn leh gabi ahaanba, waxay ahayd uun liis kale oo caan ah. Si loo hubiyo in aan wada fahamnay farqiga, aan horay u sii soconno oo aan qeexno labada:
Popular: Aad u jeclaatay, u bogay, ama u riyaaqay dad badan ama qof ama koox gaar ah.
Saameyn Inaad saameyn weyn ku yeelato qof ama wax.
Adiga suuqleyda ah halkaas, farqi weyn ayaa u dhexeeya labadooda. Waa kubbadaha indhaha iyo ujeeddada. Hadaad rabto dad badan inay arki alaabtaada… u tag caan. Laakiin haddii aad rabto dad badan inay iibsadaan alaabtaadu… saameyn ku yeelasho. Dadka caanka ah ama noocyadu waxay leeyihiin dad badan oo taas ah sida iyaga. Dadka saamaynta ku leh ama sumadaha waxay leeyihiin dad leh kalsooni iyaga.
Wali maheli? Mid ka mid ah hooyooyinkii ugu caansanaa 2012 hooyadiis ayaa lagu doodi karaa Nicole "Snooki" Polizzi. On Twitter, Snooki wuxuu leeyahay 6.1 milyan oo taageerayaal ah. Snooki wuxuu leeyahay dhibco Klout ah 88. Mawduucyada Snooki waxaa ka mid ah sawir qaadista, Pizza, dubista, militariga, iyo kabo. Magaca Snooki sidoo kale wuxuu lamid yahay hooyonimada sanadkaan liisas badan.
Shaki kuma jiro Snooki waa caanka ah. Laakiin ha ahaato ama yaanay ahayn saameyn leh mowduucyadan lagu doodi karo. Dadku waxay u eegi karaan Snooki qaabkii ugu dambeeyay ee kabaha maadaama ay tahay astaan ​​caan ah… laakiin shaki ayaa ku jira inay caawineyso inay saameyn ku yeelato fikirkaaga ku saabsan soo iibsiga kaameradaada soo socota, iibsashada pizza, su'aasha xoogga hubeysan, karinta rootiga ama su'aasha waalidnimada. Kama garaacayo Snooki… waxaan kaliya tilmaamayaa in Snooki gabi ahaanba caan tahay, laakiin waxay leedahay saameyn shaki leh.
Dhibaatadu waa kuwan saamaynta buundooyinka iyo liistada runtii saamayn kuma leh gabi ahaanba. Liistada Snooki oo ah saameyn wax ku ool ah uun sax maahan. Haddii aan doonayo ra'yi ku saabsan sawir qaadista, waan raadsanayaa Paul D'Andrea. Pizza? Waxaan u tegayaa saaxiibkay James oo iska leh Brozinni ee. Dubista? Hooyaday.
Waad helaysaa barta. Laakiin miyaad wax ka ogaanaysaa saamaynteyda? Iyagu ma caan ah mana laha malaayiin taageerayaal ah ama taageerayaal ah. Iyaga ayaa lagu kalsoon yahay maxaa yeelay waxaan la dhisay xiriir shaqsiyeed mid walba oo iyaga ka mid ah waqti ka dib waxayna kasbadeen kalsoonidayda. Kama dhimaayo dadka caanka ah inay saameyn ku yeelan karaan… badan ayaa ah. Si kastaba ha noqotee, waan ka dhimay taas si aan saameyn ugu yeesho, mid waa inuu caan noqdaa. Arrintu sidaas maahan.
Tusaale shakhsi ah, waan ogahay inaan noqday saameyn leh booska tikniyoolajiyadda suuqgeynta. Waxaan la tashaday wax ka badan $ 500 milyan oo qiimahoodu yahay helitaan iyo maalgashi dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaanan siiyay shirkado badan hagitaan weyn. Taasi waxay tiri, anigu caan kama ahi meesha. Kama heli doontid aniga 10-ka sare ee liisas aad u tiro badan oo madaxayga kama dhigayo dhacdooyinka warbaahinta bulshada iyo suuqgeynta. Waxaan aaminsanahay, haddii liisaska la qori lahaa iyadoo lagu saleynayo hogaaminta warshadaha iyo kalsoonida, waxaan is arki lahaa aniga oo aad uga sareeya. Taasi maaha cabasho… kaliya kormeer.
Waxaan ubaahanahay inaan helno wado aan sifiican ugu kala soocno saameynta iyo caan ahaanta, in kastoo. Suuqyayaashu waxay u baahan yihiin inay aqoonsadaan saamileyaasha oo ay maalgashadaan kuwa wax galaya si ay uga caawiyaan inay la wadaagaan wax soo saarkooda iyo adeegyadooda. Si kastaba ha noqotee, suuqleyda waa inay sidoo kale iska ilaaliyaan inay lacag ku lumiyaan kuwa si fudud caan u ah oo aan waxba saameyn ku lahayn.
Tags: saamayntasaameyn lehcaanka ahcaan
Naqshadeynta Bogagga Waxsoosaarka E-commerce Wax Ku oolka ah
30, 2012 at 6: 25 PM
Waxaan u maleynayaa inaan u baahanahay qeyb seddexaad oo ka baxsan "caan ah" iyo "saameyn" taas oo kaliya "muuqata". Kama doodi doono in Snooki ay caan ku tahay dhamaanteed (sida, loo bogay ama loo riyaaqay)) sida ugu fudud ee ay si muuqata u muuqato.
Waad ku mahadsantahay wadaagista, in kastoo, Doug!
30, 2012 at 11: 38 PM
Douglas, sidaad aragtay, annaga oo ah Little Bird waxaan aaminsanahay in caan ka mid ahaanshaha ku takhasusay mawduucyada gaarka ahi ay wakiil fiican u tahay jihaynta saamaynta, khibradda, iwm. Intee in le'eg ayay taasi ku samaynaysaa fikirkaaga sida ugu wanaagsan ee lagu cabbiro saamaynta?
31, 2012 at 5: 03 AM
Nabadeey @marshallkirkpatrick: disqus! Little Bird waxay qabataa shaqo aad ufiican iyada oo bixinaysa cabirro kaladuwan oo mawduuc ah oo aan awoodi karno inaan ku ogaano kuwa saamaynta leh. Xitaa niche gudahood waxaa jira khataro marka la fiirinayo caan ahaanta kaliya. Waxaan la yaabanahay haddii ay jiraan ficilo sida retweets, wadaag dheeraad ah, iwm oo daaha ka rogaya awoodda uu qofku u leeyahay inuu saameyn ku yeesho qof kale inuu tallaabo qaado. La siiyay laba koonto oo twitter ah - mid leh taageerayaal badan iyo mid leh dhawr taageerayaal ah laakiin retweets badan - Waxaan diiradda saari lahaa kan dambe.
31, 2012 at 4: 48 PM
Douglass, waad ku mahadsan tahay qoritaanka tan. Laakiin hadda waxaan helay si aan u waydiiyo waxa loola jeedo: “Shimbir yari waxay qabataa shaqo aad u weyn iyadoo bixinaysa cabbirro kala duwan oo ah a
mawduuca aan awoodno inaan ku aqoonsanno saamaynta. ”
Waxaan ahay kaqeybgale yar yar laakiin waxaan si fudud u arkaa inay ii tahay qalab waxtar ii leh. Sida iska cad waxbaan ka maqanahay waxna waa waxa aad ku helayso faallooyinkan. Fadlan ma tixgelin doontaa inaad si gaar ah u qeexdo Aad baad u mahadsantahay.
31, 2012 at 11: 04 PM
Mahadsanid @ google-8dffa4a27cb92d8c652480f605a5a5bb: disqus - with Little Bird, waxaan jeclahay xaqiiqda ah in waxqabadku yahay mid ka mid ah miirayaasha iyo in aan isbarbar dhigi karo dhaqdhaqaaqa, dhageysiga, iyo hogaamiyaasha mowduuca ee ka soo horjeeda safka la raacayo. Ma soo saareyso liis dagdag ah oo saamileyaal ah, laakiin waxay i siineysaa inaan dib ugu soo laabto horayna aan u sameeyo falanqeyn yar oo xisaabaadka ah.
Runta haddii loo sheego, aaladaha sidan oo kale ah ma aysan ahayn dhiirrigelinta qorista qoraalkan. Waxay ahayd dhammaan liisaska aan saamaynta lahayn ee Top Influencer ee sannadka 2012 aniga ayaa i dhiirrigaliyay. Waan ku qanacsanahay qalabka sida Klout, Appinions, iyo Little Bird - kuwaas oo isku dayaya inay dejiyaan algorithms si ay u bixiyaan natiijooyin wanaagsan. Waa arrin dhib badan!
Jan 2, 2013 saacadu markay ahayd 3:53 PM
Douglas - Wanaagsan in la arko wali waxaad calanka ka wadaa arintan. Waqti ayaan ku qaadanay inaan dadka ku wacdinno mowduucan. U fiirso fiidiyow aan dhawaan soo saarnay oo soo jiitay qalbiga qoraalkaaga. http://appinions.com/videos/the-true-meaning-of-influence/ Hayso shaqada wanaagsan.